AutoCAD का साथ आकार फाईलहरू काम गर्दै - Geofumadas
जनवरी, 2009 ArcGIS-ESRI, अटोक्याड-Autodesk, Microstation-बेन्टले
आकार फाइलहरू, .shp फाइलहरूको रूपमा चिनिन्छ, हुनेछ द्विध्रुवीय ढाँचाहरू टेक्नोलोजीको मामलामा तर हामी त्यसलाई वेवास्ता गर्न सक्दैनौं किनकि उनीहरू आर्कभ्यू 3x जस्तो लोकप्रिय थियो। यो कारण यही हो कि तिनीहरू अझै व्यापक रूपमा प्रयोग भैरहेका छन्, अधिकतम भू-स्थानिक प्लेटफार्महरूले तिनीहरूसँग सञ्चालन गर्न दिनचर्या विकास गरेको छ। समावेशी gvSIG गर्न सक्छ पढ्नु र सम्पादन गर्नुहोस्।
यस भन्दा पहिले प्रयोग गरिएको वैकल्पिक भनेको ESRI बाट dxf मा निर्यात गर्नु थियो, ट्याबुलर डाटा हराउने नोक्सानको साथ। यस अवस्थामा, हामी कसरी यी कुराकानी गर्ने हेर्नुहोस् velociraptors प्रयोग गर्दै अटोक्याड AutoCAD नक्सा, मैले टाक्सस बाट कोर्टसिया फोरममा कोमल प्रतिक्रियाको माध्यमबाट यो प्रक्रिया बारे सिके।
१. कुनै पनि AutoCAD मात्र होईन
आकार फाइल फाइल ज्यामितिबाट बनाइएको छ, एक्सटेन्सन फाइलमा समावेश छ .shp, त्यसपछि .dbf फाइलमा समावेश गरिएका ट्याबुलल डेटाहरू र इन्डेक्स जुन तिनीहरूलाई लिङ्क गर्दछ, जुन .shx।
यी फाइलहरूको लागि पढ्नका लागि AutoCAD नक्सा, वा सिविल 3D आवश्यक छ; यो स्पष्ट छ कि यसको विपरीत स्पष्ट छ Bentley मानचित्र gvSIG natively फाइल पढ्न सक्दैन तर यो एफडीओ जडान मार्फत व्यवहार्य छ।
उदाहरणका लागि म AutoCAD नागरिक 3D 2008 सँग गर्दैछु।
2। .shp फाइलहरू आयात गर्दै
यो गर्न यो मेनुमा यो गर्नु पर्छ:
"नक्सा / उपकरण / आयात", त्यहाँ .shp र E00 फाइलहरू र प्रारम्भिक ArcInfo कार्यस्थान को आवरण पनि अनुमति दिन्छ।
यसले म्यापिनफो (.mif .tab) र माइक्रोस्टेशन जियोग्राफिक्स (.dgn) जस्ता प्रोग्रामहरूबाट आयात गर्न अनुमति दिन्छ। मलाई लाग्छ कि यो स्वचालित रूपमा विदेशी ढाँचामा AutoCAD को राम्रो ओपनिंग हो, किनकि जब यस प्रकारले dgn बाट आयात गर्दा यो मिसलिंक र अन्य अनुकूलनहरू जटिल वस्तुहरूको शोषण गर्न र सेलहरूमा ब्ल्कहरूमा रूपान्तरण गर्ने सम्भव छ।
त्यसपछि प्यानलले प्रक्षेपणलाई अनुरोध गरेको छ र केवल एक क्षेत्र आयात गर्ने सम्भावना।
बहुभुज बन्द polylines मा रूपान्तरित छ कि यो निर्दिष्ट गर्न पनि सम्भव छ।
प्रक्रिया समान बनाउनको लागि "नक्सा / उपकरण / निर्यात" समान छ, त्यसपछि निर्यात छुट्टै, रेखा, पोइन्ट, बहुभुज र पाठहरू गरिनु पर्छ। छनौट म्यानुअल्ली गर्न सकिन्छ, तहहरू वा फीचर क्लासहरू द्वारा र यदि तपाईंले टोपोलॉजीहरू परिभाषित गर्नुभएको छ भने उत्तम।
यो डीबीएफ स्तम्भहरू निर्माण गर्नेछ, आउटपुट फाइलको प्रक्षेपण र बहुभुजहरूमा बन्द polylines को रूपांतरण हुनेछ परिभाषित गर्न को लागि पनि आवश्यक छ।
यस आयातमा र निर्यात गर्ने त्यहाँ त्यहाँ प्रोफाइल सिर्जना गर्ने विकल्प हो जुन प्रत्येक पटक शर्तहरू परिभाषित गर्न सकिँदैन, यो एआईपीएफ फाइलको रूपमा बचत गरिनेछ जुन प्रत्येक समय प्रक्रिया पूरा गरिनेछ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो मिट्टी मेनेनिक्सका लागि Geo5 सफ्टवेयर
अर्को पोस्ट गुगल अर्थ 5.0 को सुरुवातअर्को »
१ Auto लाई जवाफ दिईयो "AutoCAD का साथ आकृति फाईलहरू काम गर्ने"
माइगुल2भन्छिन्:
शुभ दिउँसो, मेरो प्रश्न छ।
मैले AutoCad सिविल 2008 मा एक .shp फाइल खोलेको छु, जुन धेरै क्षेत्रबाट धेरै फरक पार्सलहरू छन्।
1.- यदि म एक प्लस सतह जान चाहन्छु भने, सिभिलले मलाई समस्या बिना मलाई फ्याँक्छ, तर यदि मैले दुई वा बढी चयन गर्दछ भने सतह मलाई * VARIOUS * को रूपमा देखा पर्दछ। योग गर्न कोडीको लागि तरीका छ?
2.- यी भूखण्ड भित्र, अधिकांश अवस्थामा मा एक भन्दा बढी प्रकारको फसल भित्र (दाख र बादामको रूख उदाहरणका लागि)। त्यहाँ कुनै प्लाज्मामा संलग्न व्यक्तिहरू विभाजित गर्न र मलाई ती बाकसहरूको सतहलाई फिर्ता दिन सक्षम बनाउन कुनै तरिका हो?
नकरात्मक तपाईं कुनै आकृति AutoCAD नक्शाको साथ सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न, मात्र यसलाई लिंक गर्नुहोस्। तपाईं यसलाई कुनै पनि क्यूगिस वा आर्किजिससँग सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरू समान रूपमा सञ्चालन गर्न सजिलो छ।
म जान्न चाहन्छु कि अटोकाड नक्शाले दुई आकारहरू (जुन समान टेबल क्षेत्रहरू) एकमा सामेल हुन अनुमति दिन्छ। Join आदेशले तालिका कोषहरू थप गर्दछ, तर तिनीहरूलाई डुप्लिकेट बनाउँदछ जसरी उनीहरूलाई उही भनिन्छ ...
एक नमस्कार र अग्रिम धन्यवाद
शुभकामनाहरु !! म कसरी थाहा पाउन सक्छु म धेरै मेहनती योजना को लागि एक डब्ल्यूडब्ल्यूजी गर्न को लागि चार्ज गर्न सक्छु? पहिलो समय हो। यो लागत डलर वा बोल्दामा हुनेछ। URGE ME?
कुनै पनि डेग फाइल 3d मा छ यदि कुनै पनि आदेश छ भने, यो आकार गर्न र 3d मा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ ?? यदि यो अपरेसन सिगमा निर्यात गर्न सामान्य आदेशको साथ सम्पन्न हुन्छ भने, यो0आयाम सम्म सबै लाइनहरू प्रोजेक्ट गर्दछ।
एनोटेशनहरूलाई ग्राफिक्समा रूपान्तरण गर्नुहोस्। प्रत्येक प्रोग्रामसँग यसको लागि प्राय: प्लगइन हुन्छ।
म Autocad नक्सा, कोसोमो वा GvSig बाट केहि निर्यात गर्न को लागी एक तरिका खोज्दैछु ताकि तिनीहरू सामान्य स्वत: मा देख्न सकिन्छ।
मलाई लाग््छ कि हामी केहि धेरै रोचक विषयहरु को व्याख्या गर्ने कार्य को बारे मा हामी जान्दछ महान छ, तपाईंको समय र बुद्धि को लागि धन्यवाद।
जे होस् म निरन्तर यो वेबसाइट भ्रमण गर्छु, मैले यो पोष्ट याद गरेन ... त्यसैले एक बर्ष months महिना पछि म टिप्पणी गर्दछु, यद्यपि मलाई लाग्छ कि तपाईंले यस बिन्दुलाई पहिल्यै थाहा पाउनुपर्दछ 😀
AutoCAD नक्शामा आयात / निर्यातको साथ राम्रो .. peeeeeeero «सही» कुरा shp को साथ NATIE फर्म्याटमा काम गर्नु हो। मतलब ... कुनै कुरा छैन! ...
AutoCAD नक्शा टास्क फलकबाट (संस्करण २०० 2007 माथि) तपाईंसँग विभिन्न डाटा रिपोजिटरीहरू (wms, oracle, wfs, raster and [oh!] Shp) मा सिधा जडान हुने सम्भावना छ ...
केवल डाटामा जानुहोस् / डाटासँग जडान गर्नुहोस् र यो हो! मौलिक एसपीपी फाइलको रूपमा आशिष् दिन्छ, यो परामर्श, विश्लेषण, सम्पादन गर्न सम्भव छ र सबै चीज अझै पनि shp ढाँचामा छ..
यहाँ प्रश्नको आदेशको छवि
धन्यवाद, मैले पहिले नै सुधार गरेको छु।
तपाईले स्वत: पार गर्नुपर्दछ, र Autocad नक्सा प्रयोग गर्नुहोस् (सिविल 3D यसमा बनाइयो)
र तपाइँले FDO जडानलाई पनि सन्दर्भ गर्न सक्नुहुनेछ, जसरी म यो सामान्यतया यसलाई प्रयोग गर्दैन, म बुझ्दछु कि यो देशी एसपीपी फाइलमा काम गर्छ, र यसलाई आयात गर्न आवश्यक छैन
उही तिमी खराब छौ
सुझावको लागि धन्यबाद। मैले पहिले नै क्रेडिट राखेको छु।
तपाईं यो "फेला पार्नुहोस्" को स्रोत क्रेडिट गर्न सक्नुहुन्छ ...